korodhka kirada - Tenants Victoria
Haddii milkiilaha guri uu doonayo inuu kordhiyo kirada/ijaarka inta lagu jiro heshiiskaaga kireysiga, waa in ay ku siiyaan ogeysiin sax ah oo waxaana jira xaddidaado sheegaya goorta iyo inta kirada/ijaarka la kordhin karo.
miyaa la kordhin karaa kiro/ijaar?
Kirada/ijaarka lama kordhin karo inta lagu jiro heshiiska kirada waqti go’an ah haddii aan lagu caddayn qoraal ahaan heshiiska. Nasiib darro heshiisyo badan oo kireysi ah oo ay sameeyaan wakaalada hantida maguurtada ah waxaa ka mid ah weedhan, sidaa daraadeed waa muhiim inaad si taxaddar leh u aqriso heshiiska ka hor inta aadan saxiixin. Haddii aadan ku raacsanayn weedhan waxaad xaq u leedahay inaad ka gorgortamto in laga saaro, gaar ahaan maadaama weedhaha kordhinta kirada/ijaarka ayna qayb ka ahayn qodobada dhammaan heshiisyada caadiga ah. Haddii milkiilaha guri diido inuu oggolaado wax gorgortan ah ee weedhaha aan ahayn qodobada caadiga ah, heshiiskaaga waxaa loo arki karaa inuu yahay mid caddaalad darro ah marka loo eego sharciga macaamiisha.
Ogow: haddii adiga iyo milkiilaha guri ka wada xaajootaan in aad masaxdaan qodobkaas waa inaad dhammaantiin saxiixdaan halka ku xigta isbeddelka si aad u muujisaan in qof kasta uu sidaas ku raacay.
imisa jeer ayaa la kordhin karaa kirada/ijaarka?
Haddii aad gasho heshiis kiro oo cusub oo waqti go’an ama waqti aan go’nayn ah 19 Juun 2019 ama kadib laguguma kordhin karo kirada/ijaarka wax ka badan 12-kii biloodba mar.
Haddii aad gasho heshiis waqti go’an ah oo la galay, ama heshiiska aan wakhtiga go’an ahayn oo ka bilaabma ka hor 19 Juun 2019 laguguma kordhin karo kirada/ijaarka wax ka badan hal mar 6-dii biloodba. Si kastaba ha noqotee, haddii heshiis waqti go’an ah la galay 19 Juun 2019, marka heshiiska aan muddada go’an ahayni uu dhacayo oo kireysigana loo rogo mid aan wakhti go’an ahayn, inta jeer ee lagugu kordhin karo kirada/ijaarka waxay isbeddelaysaa mar 12-kii biloodba. Tanoo kale waxay khuseysaa haddii aad ku jirtay kireysiga aan wakhtiga go’an ahayn oo ka bilaabma kahor 19 Juun 2019, laakiin kadibna la saxiixay heshiis cusub oo kireysi 19 Juun 2019 ama kadib.
Waqtiyada ku habboon waxay khuseeyaan heshiisyada (sida bil ilaa bil) kireysiga aan muddada go’an ahayn, iyo heshiisyada muddada go’an ee heshiiska uu oggolaanayo kirada/ijaarka inuu kordho inta lagu jiro muddada go’an. (Haddii ay ku jirto weedh heshiiskaaga waqtiga go’an taasi oggolaanaysa in ka badan hal kordhin kiro/ijaar inta lagu jiro muddada khuseysa, waa mid aan sharci ahayn.)
ogeysiin kiro/ijaar kordhin
Milkiilaha guri WAA INUU ku siiyaa 60 maalmood ogeysiin qoraal kororka kiro/ijaar WAANA INUU isticmaalaa foom ku habboon, kaasi oo ay TAHAY inuu kuu sheego xaqa aad u leedahay in aad codsato Consumer Affairs Victoria (CAV) si aad kororka la soo jeediyey aad u qiimayso haddii aad u malaynayso inuu yahay xad-dhaaf. Ogeysiintu wuxuu noqon karaa kaliya hal koror kiro/ijaar.
Haddii ogeysiin koror kiro/ijaar ayna buuxin dhammaan shuruudahaan waa mid aan sharci ahayn oo aadan bixineynin lacagta kororka. Haddii lagu siiyay ogeysiin in kirada/ijaarka uu kordhi doono oo aad u maleyneyso in ogeysiintu laga yaabo inuu yahay mid aan sax ahayn, waxaan kugula talineynaa inaad la soo xiriirto annaga, adeeggaaga TAAP ee deegaanka, adeeg-bixiyaha Tenancy Plus ama Xarunta Sharciga Bulshada wixii talobixin ah.
Ogeysiin kiro/ijaar waa in toos laguugu dhiibo, boostada laguugu soo diro, ama qaab elektaroonig ah sida iimeyl ahaan haddii aad tan oggolaatay. Haddii aad hesho ku ogeysiinta qaab elektaroonig ah oo aadan adigana oggolaanin, fiiri heshiiska kiraddaada nalana soo xiriir wixii talooyin dheeri ah.
Haddii ogeysiin lagu soo diro boostada, milkiilaha guri waa inuu ku daraa waqti ku filan oo inta farriinta boostadu dhex ku sii jirto ah. Fiiriwaqtiyada keenista boostada ee Ustareeliya.
ka doodista kiro/ijaar kordhinta
Haddii aad u maleyneyso in kororka kirada/ijaarku uu yahay mid aad u sarreeya, waxaad codsan kartaa kormeere ka socda Consumer Affairs Victoria inuu yimaaddo oo uu eego hantida oo uu qiimeeyo haddii kororka macquul yahay. Waa inaad codsiga sameysataa 30 maalmood gudahood markaad hesho ogeysiinta.
Ku hagaaji codsigaaga:
The Director Consumer Affairs Victoria
ama iimeyl ugu dir: renting@justice.vic.gov.au
ama ugu dir fakiska: 8684 6310
Kormeeruhu waa inuu eegaa xaaladda hantida, tasiilaadka, iyo adeegyada la siiyo hantida, oo isbarbardhigaa kirada/ijaarka lagu soo jeediyey ogeysiinta iyo ta hantiyaha kale la midka ah ee aaggaas. Inta lagu jiro kormeerka waa inaad tilmaamto wax kasta oo taageeraya sheegashadaada ah in kororka kirada/ijaarka uu yahay xad-dhaaf. Tan waxaa ka mid noqon kara:
xaaladda dayactirka ee hantida
waxa guryaha la midka ah ee aaggaaga lagu kiraysto
tasiilaad ama adeegyo kasta oo aad adigu isku qabto halkii uu milkiilaha guri isagu bixin lahaa
shaqo kasta oo aad qabatay, iyadoo la raacayo milkiilaha guri ogolaanshihiisa ama heshiiska,
wixii isbeddel ah ee kirada/ijaarka iyo xaaladda hantida ama tasiilaadka laga bilaabo bilawga heshiiskaaga iyo kororkii u dambeeyey kirada/ijaarka
tirada kororka kirada/ijaarka (haddii ay jirto) 24-kii bilood ee ugu dambeeyey iyo qaddarka lacagta mid kasta oo ka mid ah kororadan.
Haddii aad waydiiso kormeeraha inuu qiimeeyo kororka kirada/ijaarka, marka uu sameeyo baaritaankiisa wuxuu siin doonaa adiga iyo milkiilaha guri warbixin qoraal ah oo ku aaddan fikraddiisaa ku saabsan kororka. Haddii kormeeruhu uu u arko kirada/ijaarka mid xad-dhaaf ah, wuxuu isku dayi karaa inuu wadahadal kala galo kiro/ijaar caddaalad ah milkiilaha guri ama wakiilka hantida maguurtada ah.
Haddii aysan iyagu ka doodin ama ka doodi karin kiro/ijaar caddaalad ah, markaad haysato warbixinta waxaad ka codsan kartaa Maxkamadda Madaniga iyo Maamul ee Victoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal,VCAT) inay soo saarto amar sheegaya in kororka aan la oggolayn. Waa inaad ku codsataa 30 maalmood gudahood markaad hesho warbixinta kormeeraha.
Haddii VCAT ay go’aamiso in kororka kirada/ijaarka uu yahay xad-dhaaf, waxay amri kartaa in kirada/ijaarka aan la kordhin ama in lagu kordhiyo qaddar yar. Waxay sidoo kale samayn kartaa waqti (ilaa 12 bilood) taas oo milkiilaha guri aan loo oggolayn inuu kordhiyo kirada/ijaarka. Si kastaba ha noqotee, VCAT ayaa soo saari doonta amaradan kaliya haddii kororka la soo jeediyey uu ka dhigayo kirada/ijaarka si aad ah mid uga badan tan hantiyaha la midka ah ee aaggaas.
Haddii kororka kirada/ijaarka uu dhaqangalo ka hor inta aanay kiiskaaga maqlin VCAT, waa inaad bixisaa lacagta kororka ah ilaa VCAT ay soo saarto go’aankeeda. Haddii go’aanku adiga ku ayido, VCAT waxay ku amri kartaa milkiilaha guri inuu kuu soo celiyo qaddar kasta oo la kordhiyey oo aad horay u bixisay.
dhimista adeegyada ama tasiilaadka
Haddii milkiilaha gurigaagu yaraynayo wixii adeegyada ama tasiilaadka uu siiyo hantida ah (tusaale, xirtey dharmaydhka la wadaago) isaga oon dhimin kirada/ijaarka, waxaad ka codsan kartaa warbixin Consumer Affairs Victoria si aad u ogaato haddii ay tahay in kirada/ijaarka lagaa dhimo. Haddii warbixintu ku ayiddo adigo waxaad ka codsan kartaa VCAT in ay u soo saarto amar kirada/ijaarka lagu dhimayo. Waa inaad ku codsataa VCAT 30 maalmood gudahood markaad hesho warbixinta kormeeraha.
wadahadal la galidda milkiilaha guri
Waxaa habboon inaad isku daydid inaad wadahadal kala gasho milkiilaha guri ama wakaalada hantida maguurtada ah wixii ku saabsan kordhinta kirada/ijaarka. Waxaa laga yaabaa inay diyaar u yihiin in ay yareeyaan, gaar ahaan haddii aad tahay kireyste raagay oo la isku hallayn karo ama waxay tahay inaad ka guurto kororka dartii.
Haddii aad haysato warbixinta kormeeraha waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa tan si aad isugu daydo oo aad ugala xaajooto milkiilaha guri ama wakaalada sidaa daraadeed uma baahnid inaad qaaddo tallaabada xigta ee tagista VCAT. Hubi in heshiis kasta oo aad gaadhaan uu noqdo mid qoraal ah oo aad saxiixdeen adiga iyo milkiilaha guri ama wakaalada iyo inaad haysato nuqul heshiiskan ah.
diidmada bixinta kororka
Haddii milkiilaha guri ama wakaaladu idin siiyey ogeysiin sax ah kororka kirada/ijaarka oo aad diido in aad bixiso, waxaad noqon doontaa qof kirada la daahay (sida, inaad kiradii dib ula dhacday). Haddii ay tani si tartiib ah kuugu gaadho 14 maalmood oo kiro/ijaar aan la bixin, taasi oo aad noqonayso 14 maalmood oo kiro la daahis ah, milkiilaha guri ama wakaaladu wuxuu ku siin karaa 14 maalmood Ogeysiin ah si aad u Bannayso guriga uguna sheegto VCAT in guriga lagaa saarayo. Waxaa lagu siin doonaa fursad aad ugu soo bandhigtid kiiskaaga VCAT, laakiin waxaa jira had iyo jeer suurtagalnimo ah in lagu saari doono.
Macluumaadkan waa tusaale kaliya waana inaan loo isticmaalin oo kaliya bedel ahaan tallo sharci oo aqoon leh.
Macluumaadka boggan waxay la xidhiidhaan heshiisyada kirada ee kolba la cusboonaysiiyo iyo heshiisyada kirada muddada gaaban ee go'an (muddooyinka go'anka ee ka yar 5 sano) Macluumaadku waa mid cusub taariikhda daabacaadda, laakiin isbeddel ayaa lagu samayn karaa kaasi oo ku xidhan isbeddelada ku iman kara shuruucda la xidhiidha kirada hantiyaha. Haddii aanad hubin shuruucda ku khuseeya, waa inaad raadiso talo sharci.
bogagga la xiriira
Xeerka Kiraysiga Guryaha 1997 (Websaytka AustLII)
Qaybta 44 – Intee in leeg ogeysiinta kororka kirada/ijaarka ayaa loo baahan yahay?
Qaybta 45 – Kireyste ayaa laga yaabaa inuu cabasho u diro CAV ku saabsan kirada xad-dhaafka ah
Qaybta 46 – Codsi ku socda VCAT oo ku saabsan kiro/ijaar xad-dhaaf ah
Qaybta 47 – Maxaa VCAT amri kartaa?
Qaybta 48 – VCAT waxay amri kartaa soo celinta lacag kirada/ijaarka
Qaybta 506 – Diritaanka dukumentiyada
u baahan caawinaad badan
Talada loogu talagalay kireystayaasha (advice for tenants)
Kireystayaal Victoria | Kireystayaal qadka caawinaada 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
Kireystayaal Victoria aqoonsanyihiin taageeradda Dowladda Vitorian.